Farqiga u dhexeeya cimilada iyo cimilada: sifooyinka iyo xiisaha | Shabakadda Saadaasha Hawada
Jarmal Portillo | 16/06/2022 11:05 | Saadaasha hawada
Labadeena maalinba maalinta ka danbeysa iyo warbaahinta kala duwan, waxaan ka hadalnaa cimilada iyo cimilada. Dad badan ayaa ku jahawareeriya fikradahan mana garanayaan sida saxda ah waxa ku jira farqiga u dhexeeya cimilada iyo cimilada.
Sababtaas awgeed, waxaanu maqaalkan u huray in aanu idiinka warramo waxa ugu weyn ee ay ku kala duwan yihiin cimilada iyo cimilada jira iyo mid kasta oo ka mid ah sifooyinka uu leeyahay.
1 Farqiga u dhexeeya cimilada iyo cimilada
2 Cimilada cimilada
3 Qodobbada tilmaamaya faraqa u dhexeeya cimilada iyo cimilada
4 waa maxay cimiladu
5 Qalabka saadaasha hawada si loo cabbiro cimilada
6 kala duwanaanshaha cimilada
Inkasta oo fikradahoodu ay dhow yihiin, ereyada cimilada iyo cimilada lama isticmaali karo si isku mid ah. Waxaa jira farqi asaasi ah oo kala saaraya oo kala saaraya: waqti go'an.
Marka aan ka hadlayno cimilada, waxaan tixraacnaa xaaladaha jawiga sida heerkulka, qoyaanka ama cadaadiska meel gaar ah iyo muddo gaaban. Taasi waa, marka aan aragno saadaasha cimilada, waxay ka hadlaan cimilada, maaha cimilada.
Cimilada, dhanka kale, waxaa loola jeedaa dhammaan qiimayaashan jawiga, laakiin la isku celceliyay muddo dheer hal aag. Taasi waa sababta, marka ay timaado isbeddelka cimilada, tusaale ahaan, waxay tixgelisaa diiwaannada iyo xogta la ururiyey sannadihii la soo dhaafay.
Sida aan sheegnay, waxaan ku qeexi karnaa cimilada inay tahay tirakoobka cimilada muddada-dheer, caadi ahaan 30 sano. Si loo cabbiro cimilada, waxaan u baahannahay inaan eegno isbeddellada ku yimaada curiyayaasha, kuwaas oo aan hoos ku taxnay. Nidaamka cimilada ee aagga la siiyay waxaa lagu go'aamiyaa shantiisa qaybood. Qaybaha cimiladu waa:
Cimilada sidoo kale waxaa saameeya arrimo badan oo kala duwan, sida muuqaalka dhulka ama dhirta.
Waxaa jira shan walxood oo ka kooban cimilada:
Heerkulka hawada: Sida magacaba ka muuqata, waa sida ay hawadu u kulushahay ama u qaboojiso wakhti cayiman iyo wakhti cayiman. Tan waxaa inta badan saameeya shucaaca cadceedda, kaas oo ka dhigi doona mid sare ama hoos u dhaca iyadoo ku xiran meeraha iyo juqraafiga. Heerkulka hawada iyo roobabku waa labada shay ee ugu muhiimsan cimilada.
Roobab: Waxaa ku jira nooc kasta oo biyo ah oo ka yimaada daruuraha ku jira jawiga ku dhaca oogada dhulka. Roobka, barafka, iyo roobdhagaxyaalaha waa noocyada roobabka.
Cadaadiska Hawada: Waa culayska ay samayso tirada hawadu ee dhan walba. Mar kasta oo ay sare u kacdo, miisaankani wuu yaraanayaa sababtoo ah waxaa naga sarreeya hawo yar. Heerkulka ayaa sidoo kale sababa in hawadu ay balaadhiso oo ay lumiso cufnaanta, sidaa darteed marka la joogteeyo, heerkulku sarreeyo, cadaadiska ayaa hoos u dhigaya.
Dabayl: Waa dhaqdhaqaaqa hawada dhex mara jawiga.
Huurka: Ugu dambeyntii, waxaa ka mid ah cunsurrada cimiladu waa qoyaanka atmospheric, kaas oo ah xadiga biyaha ku jira jawiga qaab uumiga.
Uumi-baxa biyaha: Habka jireed ee ay biyuhu uga beddelaan dareere una beddelaan gaas.
Dabool Cloud: Waxay ku saabsan tahay daruuraha iyo cadadka daruurahan ee jawiga.
Qodobbada tilmaamaya faraqa u dhexeeya cimilada iyo cimilada
Waxaa jira 6 arrimood oo cimilada ugu waaweyn:
Latitude: waa masaafada xagal u dhaxaysa bar la bixiyay iyo dhulbaraha dhulka. Tani waxay saamaysaa xagasha dhacdooyinka shucaaca cadceedda, kaas oo saameeya xoojinta kuleylka aagga iyo dhererka maalinta iyo habeenkii.
Dhererka: waa masaafada toosan ee u dhaxaysa bar gaar ah iyo heerka badda. Tani waxay saameyn weyn ku leedahay cimilada, maadaama joogitaanka sare had iyo jeer macnaheedu yahay heerkul hoose iyo cadaadis hoose. Dabaqa kulaylka waxaa lagu bixiyaa joogga.
Fogaanta badda: Tani waa muhiim iyadoo ay ugu wacan tahay saameynta ay leeyihiin biyo badan iyo awooddooda inay ku sii hayaan kuleyl ka badan sagxadaha qaaradaha. Gobollada ka durugsan badweynta ayaa leh heerkul sare oo heerkulbeeg ah sababtoo ah ma laha saamaynta jilicsanaanta badda.
Xilliga Badweynta: Waxay ka qaadaan xaddi badan oo biyo ah meelo badan ama ka yar oo diiran, si ay u dhaqmaan sida tuubooyinka ama qaybo ka mid ah hiitarka ama qaboojiyaha.
Hanuuninta Topographic: Calaamadee in aag qorraxdu tahay ama hadh leh iyo inta ay helayso fallaadhaha qorraxda.
Jihada dabaylaha meeraha iyo dabaylaha xilliyeed: Marka aan ka hadalno arrimaha cimilada, waxaan xusnaa dabaysha, taas oo la mid ah shaqada qulqulka badda, dhaqdhaqaaqa xaddi badan oo hawo ah, oo leh heerkul kala duwan iyo duufaanno ama saameyno kale.
Cimiladu waxa ay tilmaamaysaa xaaladda dhammaan arrimahan jawiga ee meel iyo waqti cayiman. Waxaynu arki doonaa marka aynu xusno haddii uu roob da'ayo berrito ama haddii ay qorraxdu dhici doonto ama haddii ay aad u qabowday todobaadkii hore. Markaa taasi waa waxa aan ku aragno saadaasha cimilada ama saadaasha cimilada.
Waqtiga ayaa si qoto dheer loo bartay tan iyo wakhti hore, si sax ah sababtoo ah si kasta oo aan si fiican u naqaanno, si sax ah ayaan u naqaannaa cimilada iyo, sidaas darteed, qalab badan oo aan ku ogaan karno. Awood u yeelashada in la saadaaliyo cimilada ayaa had iyo jeer aad muhiim ugu ah aadanaha. Laga soo bilaabo codsigaaga ugu aasaasiga ah ee beeraha, ilaa diyaarinta qorshe, safar ama dhacdo.
Qalabka saadaasha hawada si loo cabbiro cimilada
Si aan u dhamaystirno fahamkeena farqiga u dhexeeya cimilada iyo cimilada, waxaan u baahanahay oo kaliya inaan wax yar ka niraahno kan dambe. Waxa kale oo muhiim ah in la ogaado qalabka saadaasha hawada ee cabbira wakhtiga oo sameeya saadaasha hawada ama saadaasha hawada:
Heerkulbeegga: Waxay u ogolaataa in la cabbiro heerkulka atmospheric ee meel waqti go'an. Tani waa sida ugu badan, celceliska iyo heerkulka ugu yar ee aagga loo yaqaan.
Barometer: Cabbir cadaadiska atmospheric.
Anemometer: Cabbir xawaaraha dabaysha.
Pluviometer: Waxay cabbirtaa roobab, roobdhagaxyaale iyo baraf da'aya.
Vane: Waxay naga caawinaysaa inaan ogaano jihada dabayshu u socoto.
kala duwanaanshaha cimilada
Cimilada iyo cimiladu waa ereyo si is beddel ah loo isticmaalo si loogu gudbiyo xaaladda hadda jirta ama hadda jawiga iyada oo loo eegayo miisaan saacado ilaa maalmo ah. Sidaan kor ku soo xusnay, iyadoo cimiladu ( saadaasha hawada) ay tilmaamayso xaaladda jawiga hadda jirta. Cimiladu waxa ay tilmaamaysaa isbeddelada ka badan soddon sano ama ka badan.
Kala duwanaanshiyaha cimiladu waxa loola jeedaa isbeddelada dhexdhexaadka ah ee cimilada iyo tirokoobyada kale ee dhammaan miisaanka ku meel gaadhka ah iyo goobta, ka baxsan dhacdooyinka cimilada shakhsi ahaaneed, oo ku dhaca waqtiyo kala duwan oo miisaannada cimilada.
Waxaan rajeynayaa in macluumaadkan aad wax badan ka baran karto faraqa u dhexeeya cimilada iyo cimilada.
Wadada buuxda ee maqaalka: Saadaasha Shabakadda » Saadaasha hawada » Farqiga u dhexeeya cimilada iyo cimilada